Hindiya Maxay Ku Wayday Dulqaadka Diimaha Ee Ka Hirgalay Indonesia – HCTV
Ahmed Cige 0	July 9, 2019 2:54 pm
Cabsi Laga Qabo IRAN Iyo Ruushka Oo Kor U Qaadday Suuqa Kala Iibsiga Hubka
Jakarta, (HCTV) – Labada waddan ee ugu balaadhan Asia oo dimuqraadiyadoodu ay kala duwan tahay ayaa qabtay doorashooyinkooda todobaadadii la soo dhaafay, dulqaadka diimaha ayaa codbixintooda ku lamaana.
Cod bixiyeyaashu, si kastaba oo ay ahaataba waxay si buuxda isaga soo horjeedeen ama ay ku kala duwanaayeen ayaa hadana ay bixiyeen go’aamadooda codbixinta.
Indonesia, xukuumadda madaxweynaha xilka haya ee Joko Widodo (oo loo yaqaano Jokowi) ayaa ku guuleysatay inay faafiso fariin kala duwan. Jokowi wuxuu ku ololaynayey isbahaysi ballaadhan oo lagu beddelay, Isbahaysi Diinta Islaamka ee Indonesia, wuxuuna ku guuleystay doorashadii si buuxda oo cadaalad ah.
Hindiya, guushu waxay sidoo kale ay la jirtay Raysal Wasaaraha xilka haya ee Narendra Modi, laakiin waxay ku jiraan axdi iyo shuruudo kala duwan. Modi, waxa uu hogaamiyaa Xisbiga Hindida Bharatiya Janata Party (BJP), kaas oo ku guulaystay aqlabiyadd ballaadhan isaga oo aragtida xisbigiisu ay tahay Hindiya iyo Hindus-ka.
Sida doorashooyinka oo dhan, dabcan, kuwani maaha kuwo tixraac ah oo ku saabsan hal arrin. Jokowi iyo Modi waxay leeyihiin guulo badan oo ay u geystaan ​​asxaabtooda, iyo sumcadda hormarinta sida ay u eegayaan su’aalaha ku saabsan dhinaca cibaadada iyo takoorka diineed.
Ma aha oo kaliya waxa saameeya xisbiga mucaaradka India ugu weyn ee the Congress party, sida caadada u ah codka diiniga ah, ayaa doortay musharaxiisa si musuqmaasuq la’aan ah oo ah hannaan siyaasadeed oo awood leh, iyada oo xisbigii Jokowi ee Indonesia ku fashilmay inuu ka shaqeeyo hoggaamintiisa qotoda dheer guul darro dhow.
Dulqaadku wuxuu ku guuleystaa oo kaliya marka kooxda heysata horyaalka ay awood u yeelan karto inay soo bandhigto musharax xoog leh. Saameyntu waa ka guulaysiga diineed, sida Indonesia, waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo jilicsan, tartamaya, oo sidaas darteed suuragal u ah in wakhtigoodu gaaban yahay.
Hase yeeshee, qodob culus ayaa ku tilmaamaya xajmigu inta uu leegyahay: fikradaha taariikhiga ah ee qarniyada, dib u soo laabashada tobanaan sano ama qarniyo ah, waxay gacan ka geystaan ​​in go’aan laga gaadho in fariinta dulqaadku ay isku kalsoonaan doonto ama ay ku dhici karto in la iska dhago mariyo. Laga soo bilaabo xilligii ay ku dhawayd inay noqdaan kuwo isku dhafan oo ah qaran madaxbannaan dhammaadkii 1940-meeyadii, Indonesia iyo India labadaba waxay dhaxal-beeleen kala duwanaansho hoggaamiyeyaasha iyo dhaqdhaqaaqyada u dagaalamayay madax-bannaanida.
Dhaqan ahaan, dastuurkii waddanku wuxuu u hoggaansamay dhinaca diinta oo Hindus-ka ayaa Hindiya hogaamiya, Islaamka ee Indonesia-ku saabsan diimaha kale waxa loo muujiyaa dulqaad balaadhan.
Cali Maxamed Geedi Oo Kenya Iyo Somalia Ugu Baaqay Inay Meesha Ka Saaraan Muranka Badda